[REC]4Apocalypse (2014) အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုး(ရုပ်သံ/အကြည်) - Software Guide
Home / HD Movies / [REC]4Apocalypse (2014) အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုး(ရုပ်သံ/အကြည်)
[REC]4Apocalypse (2014) အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုး(ရုပ်သံ/အကြည်) Reviewed by Ko Lin on 5:09:00 AM Rating: 5
[REC]4Apocalypse (2014) အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုး(ရုပ်သံ/အကြည်)
Ko Lin 5:09:00 AM HD Movies
Angela Vidal တစ်ဦးက high-လုံခြုံရေး quarantine စက်ရုံ, တစ်ဦးတည်းသောအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူနှင့်အဆောက်အဦအတွင်းကြောက်မက်ဖွယ်အဖြစ်အပျက်များမှသကျသခေံအတွက်နှိုး။ သို့သော်သူမ၏ဖို့ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့သတိရမိတာလဲ သူမကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတင်ဆောင်သလဲ? မကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးအသစ် ပို. ပင်သေစေနိုင်သောပုံစံများကိုပင်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြန့်နှံ့နေစဉ်ယုံကြည်မှုအထီးကျန်စက်ရုံမှတဆင့်ပြန့်နှံ့။
ဖုန်းသမားတွေအတွက်လည်း ဖုန်းတဲ့ကနေ အလွယ်တစ်ကူ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်၊ ဒေါင်းယူနိုင်ရန် အတွက်လည်း pcloud ကနေ တင်ပေးထားပါတယ်။ 482.3 MB သာရှိပြီး ၊ အကြည်လင်ဆုံး တင်ပေးထားပါတယ်။ အောက်က Watch Movies ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး ကြည့်ရှုဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်....။